Oppo Reno ၏ဒီဇိုင်းသည်သင်၏ကင်မရာ၌အံ့အားသင့်စရာကိုဖုံးကွယ်ထားသည် Androidsis
Oppo Reno ၏ဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏ကင်မရာတွင်အသစ်သောအထင်အရှားတွေ့ရသည်
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်မှာ Oppo သည် OnePlus မိသားစုတွင်မည်သည့်ဖုန်းမဆိုမဖွင့်မီစမ်းသပ်ကစားစရာဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒီအမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုလုံးဟာ VIVO အပြင်တရုတ်မူရင်း BKK စီးပွားရေးအုပ်စုမှာပါ ၀ င်တာကြောင့် Oppo မော်ဒယ်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ် OnePlus အထင်ကရဒီဇိုင်းကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့ Oppo Reno ဒီဇိုင်း မော်ဒယ်တစ်ခု၏ရှေ့ပြေးဖြစ်ခဲ့လျှင်သင်၏ကင်မရာ၏အသစ်အဆန်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ရှိသည်ဟုမည်သူမျှမငြင်းနိုင်ပါ။
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့အချို့ကိစ္စတွေပေါက်ကြားခဲ့ကြတာကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အသေးစိတ်ဖုံးကွယ်ထားသည့် Oppo Reno ၏ဒီဇိုင်းကိုပြသသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှိအခြားစမတ်ဖုန်းများနှင့်ကွဲပြားမှုကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲစေသောပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောကင်မရာစနစ်ဖြစ်သည်။ အခြားဖုန်းတစ်လုံးလိုချင်ပါသလား Oppo ၏ Reno အသစ်သည် ဒီတစ်ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုပါက ကောလာဟလသတင်းများထွက်ပေါ်နေ?
ဤဆောင်းပါးနှင့်တွဲဖက်နေသောပုံများတွင်သင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ Notpo ကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိရိယာကိုကမ်းလှမ်းရန် Oppo Reno ၏ဒီဇိုင်းသည်ထိပ်ဆုံးမှဆွဲယူနိုင်သောကင်မရာပါ ၀ င်သည်။ သတိထားပါ၊ Oppo Reno ကင်မရာဖြင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံနမူနာများ နှင့်ရလဒ်ကျွန်တော်တို့ကိုအံ့သြစရာသလိုပဲပါပြီ။ မင်းလိုလား ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောကင်မရာ?
ဤရုပ်ပုံများသည်အတုများဖြစ်နိုင်သည်မှာမှန်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအတော်အတန်မှန်ကန်သောပုံတစ်ပုံဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် Oppo Reno ကိုinပြီလတွင်တင်ပြမည်, ဒီပုံကိုအမှန်တကယ်ကြောင်းအခွင့်အလမ်းတွေကိုအဆတိုး။ ပြီးတော့မင်းရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲလား။ ဒါဟာအကြီးမြတ်ဆုံး၏အမြင့်မှာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့် Oppo Reno တွင် Snapdragon 855 ပရိုဆက်ဆာနှင့် Qualcomm ၏သရဖူတွင်ရတနာပါဝင်သည်။ RAM ၏ ၆ မှ ၈ GB ကြားရှိမည်။
ယခုငါတို့ Oppo Reno တင်ပြမည့်ရက်ကိုusပြီ ၁၀ ရက်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်၊ အာရှထုတ်လုပ်သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေသည့်အရာဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကသူ့ရဲ့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်တဲ့ကင်မရာကို ၀ န်ခံရမယ်၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Oppo Reno ၏ဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏ကင်မရာတွင်အသစ်သောအထင်အရှားတွေ့ရသည်
Google Podcast သည်ဖြစ်ရပ်အချို့၏မှတ်တမ်းကိုစတင်ပြသခဲ့သည်
Xiaomi Mi 8 Lite နှင့်အခြားစျေးပေါသောလက်ကိုင်ဖုန်းများကို Amazon's Spring Deals မှပြုလုပ်သည်